एडोब | को साथ एक पीडीएफ फाइल कम्प्रेस कसरी गर्ने Martech Zone
एडोबको साथ पिडिएफ फाइल कसरी कम्प्रेस गर्ने
पछिल्ला केही वर्षहरुमा, म एक महान उपयोग गर्दै थिए मेरो पीडीएफ फाइलहरू कम्प्रेस गर्न तेस्रो-पार्टी उपकरण अनलाइन प्रयोगको लागि। स्पीड जहिले पनि एक कारक अनलाइन हुन्छ, त्यसैले म पीडीएफ फाइल ईमेल गर्दैछु वा होस्ट गर्दैछु, म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि यो संकुचित छ।
पिडिएफ किन कम्प्रेस गर्ने?
कम्प्रेसनले एक फाईल लिन सक्दछ जुन बहु मेगाबाइट हो र यसलाई केही सय किलोबाइटमा ल्याउँदछ, यसलाई खोजी इन्जिनहरूद्वारा क्रल गर्न सजिलो बनाउँदछ, यसलाई डाउनलोड गर्न छिटो बनाउँदछ, र ईमेलबाट एट्याच गर्न र डाउनलोड गर्न यसलाई सजिलो बनाउँदछ।
कहिलेकाँही ग्राहकहरू मलाई सोध्छन् कि कुन सेटिंग्स PDF कम्प्रेसनको लागि उत्तम हो ... तर कम्प्रेसन र एक्सपोर्ट सेटिंग्समा विशेषज्ञ नभएको कारण ईमान्दारीपूर्वक मलाई कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने बारे कुनै विचार छैन। यदि तपाईं एक समर्थक हुनुहुन्छ र CCITT, फ्ल्याट, JBIG2, JPEG, JPEG 2000, LZW, RLE, र ZIP कम्प्रेसन सेटिंग्स बुझ्नु हुन्छ ... म निश्चित छु कि तपाईंले यसलाई निकाल्नुहुनेछ। त्यहाँ लेखहरूको एक टन छन्।
बरु मेरो लागि काम गर्नको लागि मात्र एउटा कम्प्रेसन उपकरण प्रयोग गर्‍यो। धन्यबाद, एडोब मात्र प्रदान गर्दछ!
एडोब एक्रोब्याटको साथ पिडिएफ कसरी कम्प्रेस गर्ने
के मैले महसुस गरेन त्यो मेरो हो एडोब रचनात्मक क्लाउड लाइसेन्सले पहिले नै एक्रोब्याट भित्र बनाइएको कम्प्रेसन उपकरण समावेश गर्‍यो, एडोबको प्लेटफर्म सम्पादन, डिजाईन, र पिडिएफहरू एकीकृत गर्नको लागि। यदि तपाइँ एक्रोब्याट डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तपाइँ सजिलै तपाइँको पिडिएफ कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ:
यसमा पीडीएफ खोल्नुहोस् एक्रोब्याट डीसी.
खोल्नुहोस् पीडीएफ अनुकूलन गर्नुहोस् उपकरण एक पीडीएफ कागजात कम्प्रेस गर्न।
छनौट उपकरणहरू> पीडीएफ अनुकूलन गर्नुहोस् वा दायाँ प्यानलबाट उपकरणमा क्लिक गर्नुहोस्।
चयन गर्नुहोस् फाइल आकार घटाउनुहोस् शीर्ष मेनूमा।
सेट एक्रोब्याटको अनुकूलता संस्करण र ठीक क्लिक गर्नुहोस्। पूर्वनिर्धारित अवस्थित संस्करणमा हुनेछ।
चयन गर्नुहोस् उन्नत अनुकूलन शीर्ष मेनूमा छवि र फन्ट कम्प्रेसनमा अपडेटहरू बनाउन। क्लिक गर्नुहोस् ठीक छ जब तपाईं परिमार्जन गर्नुभयो।
छनौट फाइल> को रूपमा बचत गर्नुहोस्। हालको फाइल अधिलेखन गर्न उही फाइलको नाम राख्नुहोस् वा नयाँ फाईललाई सानो पिडिएम आकारको नाम बदल्नुहोस्। एक स्थान छान्नुहोस् र बचत क्लिक गर्नुहोस्।
एडोब अनलाइन को साथ एक पीडीएफ कम्प्रेस कसरी गर्ने
यदि तपाईंसँग छ भने एडोब रचनात्मक क्लाउड इजाजतपत्र, तपाइँ पनि तपाइँको पीडीएफ संकुचन गर्न Adobe Acrobat डाउनलोड गर्न जरूरी छैन! एडोबसँग एक अनलाइन उपकरण छ जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ!
केवल एक पीडीएफ अपलोड र एडोब संकुचन र डाउनलोड हुनेछ। राम्रो र सजिलो!
एक पीडीएफ अनलाइन कम्प्रेस गर्नुहोस्
टैग: एक्रोब्याट DCएडोबएडोब एक्रोब्याटएडोब रचनात्मक बादलएडोब अनलाइनCCITTसंकुचन पीडीएफकम्प्रेसन सेटिंग्सफ्ल्याटJBIG2jpegJPEG 2000LZWPDFपीडीएफ कम्प्रेसनRLE